विज्ञापन मिडियाले परम्परागत रेडियो समाचार पत्रहरू र पुस्तकहरू बाट हालको टेलिभिजन नेटवर्क र इनडोर / आउटडोर प्रोफेशनल एलईडी डिस्प्लेमा साटासाट गरेको छ। Everyinled नवाचार अध्ययन गर्न जारी, प्रदर्शन उद्योग मा यसको आफ्नै ठाउँ बनाएको छ। हामी विदेश बजार विस्तार गर्न जारी छ, र दुनिया भर मा धेरै बिभिन्न देशहरु का ग्राहकहरु संग एक दीर्घकालीन मैत्री सम्बन्ध स्थापना।
हाम्रो भर्खरको प्रोजेक्ट साइप्रसको पुरानो ग्राहकको लागि हो, यो प्रोजेक्ट २०..x6 एमएक्स २.m०4 मीटर पी Cur घुमाइएको एलईडी डिस्प्ले हो, विनिर्देशन निम्नानुसार: न्यानस्टार एसएमडी २१२१ कालो बत्तीहरू, 12१२4 आईआईसी, मीनवेल बिजुली आपूर्ति, शक्तिशाली LVP7000 भिडियो प्रोसेसर।
जब तीनिहरू स्थापना गर्छन्, तिनीहरूले पत्ता लगाए कि केही समस्याहरू उत्पन्न भएका थिए, उनीहरूको समाधान गर्न गाह्रो छ, हामीले तत्काल इन्जिनियरलाई सहयोगको लागि पठाउने निर्णय गरे, हाम्रो संयुक्त प्रयासमा, सबै कुरा पूर्ण गर्न पूर्ण छन्। यो हाम्रो लागि पहिलो आदेश होईन। कम्पनी, तिनीहरू हाम्रो सेवा र उत्पाद गुणस्तर संग सन्तुष्ट छन्, हामीले धेरै वर्ष सँगै काम गरिरहेका छौं। आशा छ कि हामी निकट भविष्यमा अझ बढी परियोजनालाई सहयोग गर्न सक्छौं र साइप्रस र भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा थप व्यापार विकास गर्न सक्दछौं।
Everyinled सधैं संसारको बाटो मा उत्तम उपयुक्त समाधान ल्याउन भएको छ, तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ? हाम्रो प्रिय साथी!
पोष्ट समय: मार्च -२-20-२१२१